Kenya Airways Oo Joojisay Duulimaadyadii Ay Ku Taggi Jirtay Dalal Ay Somaliya Ka Mid Tahay – somalilandtoday.com
(SLT-Nairobi)-Shirkadda Duulimaadyada ee Kenya Airways ayaa shaaca ka qaaday inay joojisay duulimaadyadii ay ku taggi jirtay magaalooyinka ay ka mid tahay Magaalada Muqdisho, iyadoona arrintaasi faah faahisay.
War Saxaafadeed ay soo saartay ayaa marka hore lagu sheegay in Kenya Airways ay iska joojisay duulimaadyadii ay ku taggi jirtay Magaalooyinka Muqdisho (Somaliya), Djibouti (Jabuuti), Khartoum (Sudan), Luanda (Angol), Mabuta (Mozambique), Blantyre ( Malawi), Bamako (Mali) iyo Barasavile (Congo).
Dhammaan magaalooyinka oo caasimado u ah dalalkaasi oo Qaaradda Africa dhaca ayay sababta ay duulimaayada uga joojisay waxaa ay shirkadda ku sheegtay in dalalkaasi aynaan ahayn kuwo dhaqaale ahaan is bixin kara, ka dib saamaynta dhaqaale ee ka dhalatay xanuunsidaha COVID-19.
War Saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in taasi bedelkeeda ay shirkada sii wadi doonto isku xidhka duulimaadyadii kale ee shirkadda wada shaqaynta la lahaa.
Tani ayaa waxay ku soo aadaysaa, xilli Dowladda Kenya ay toddobaadkii hore dib u fasaxday duulimaadyadii caalamiga ahaa ee dalkeeda imaan jiray iyo kuwii kale ee dibadda u rakaabsanaayay.